အချစ်ရဲ့ည(၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း-ဗမာတေး) | https://khaingkyawsanmusics.wordpress.com
ခိုင်ကျော်ဆန်း တေးသံသာမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်
မိုနို ရခိုင်တေးသီချင်း စုစည်းမှုများ
Coalition of English Song
ဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်း၏ သမိုင်းဝင် မိန့်ခွန်းများ
ဗမာစုံတွဲ တေးသီချင်း စုစည်းမှုများ
တစ်စိတစ်စောင်း ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ
Filed under မြန်မာ(ဗမာ)တေးခြင်း, ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း(ဗမာ)
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။
Comment များပေးနိုင်ပါသည်။သင်ပေးခဲ့သောComment များအား ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Cancel reply
တေးသီချင်း ပို့ပေးသူများ စာရင်းကို အောက်က ပုံကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
RFA မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ရခိုင်စာပေအကြောင်း
You Can Search For Here The Songs You Want After You Type.
The Days I Posted InTo This Site
Coalition As Serial Months(လအလိုက်စုစည်းမှုများ)
Coalition As Serial Months(လအလိုက်စုစည်းမှုများ) Select Month October 2013 (6) August 2013 (18) July 2013 (12) June 2013 (15) May 2013 (3) April 2013 (9) March 2013 (7) April 2012 (45) March 2012 (70) February 2012 (80) January 2012 (116) December 2011 (121) November 2011 (80) October 2011 (96) September 2011 (163) August 2011 (153) July 2011 (186) June 2011 (79) May 2011 (71) April 2011 (73) March 2011 (134) February 2011 (8)
သမိုင်းဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်းမှ အရှင်ဥာဏိသာရ မေးမြန်းမှုအပေါ်သမိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်များ(အောက်က ပုံကို နှိပ်ပါ)
Recent Posted Songs
လန်ဒန်က မမ(ဆို-Pi Soul-ဗမာတေး)
လွင့်ထွက်သွားသော အချစ်(ဆို-Pi Soul-ဗမာတေး)
ကိုယ်ချင်းစာပါ(ဆို- pi Soul-ဗမာတေး)
ငရို့နိုင်ငံ ငရို့ယဉ်ကျေးမှု ငရို့သွေး(ဆို-ညီမင်းခိုင်)
ဦးနေမျိုးဝေ ဘာသာပြန်ထားသော ကုရ်အာန်ကျမ်း
Right Now Stop Mr Quintana’s Mandate In Myanmar
Singers(အဆိုတော်များ) Select Category A-နွန်(ဗမာ) Aerosmit(english) Articles(English Version) ကဗျာ(ရခိုင်) ကမ္ဘာသစ်တေး တေးစီးရီးသီချင်း(လေးဖြူ-ဗမာတေး) ကမ္ဘာပြတ်ပတ်ဖို့(လေးဝတီအဖွဲ့) ကိုကိုမောင်(ဗမာ) ကိုကိုဌေး(ရခိုင်) ကိုကိုနိုင်(ရခိုင်) ကိုညီအေး(ရခိုင်) ကိုယ်ချင်းစာ တတ်ပါစေ(ဆောင်းပါး) ကိုခိုင်ဇော်(ရခိုင်) ကိုင်ဇာ(ဗမာ) ကိုလှကြည်(ရခိုင်) ကိုသန်းဆွေ(ရခိုင်) ကိုကြီး(ရခိုင်) ကံထွန်းကြည်(ရခိုင်) ခင်မောင်ထူး(ဗမာ) ခိုင်ထူး(ဗမာ) ခိုင်ဖူးထူး(ရခိုင်) ခိုင်မင်းစိုး(ရခိုင်) ခိုင်မင်းဆက်(ရခိုင်) ခိုင်မင်းသွီး(ရခိုင်) ခိုင်မင်းဟိန်း(ရခိုင်) ခိုင်မိုး(ရခိုင်) ခိုင်သီတာဦး(ရခိုင်) ခိုင်ကျော်လင်း(ရခိုင်) ခိုင်အောင်ချေ(ရခိုင်) ခိုင်ပြည်ကျော်(ရခိုင်) ခိုင်မြတ်မင်း(ရခိုင်) ချစ်ခွင့်ပေးပါ တေးစီးရီးသီချင်း ချစ်ခြင်းဖွဲ.အလင်္ကာ တေးစီးရီးသခြင်း ချန်းခင်(ဗမာ) ချန်းချန်း(ဗမာ) ဂီတသစ် တေးစီးရီးသခြင်း ဂရေဟမ်(ဗမာ) ဂျီလတ်(ဗမာ) ဂျွန်ဂို(ဗမာ) စစ်အိမ်(ရခိုင်) စစ်ငြိမ်းနိုင်(ရခိုင်) စစ်နိုင်(ရခိုင်) စည်သူလွင်(ဗမာ) စန်းနီလာဝင်း(ရခိုင်) စာမျက်နှာ(၁၅) တေးစီးရီးသီချင်း(လေးဖြူ-ဗမာတေး) စိမ်းလန်းနော်(ရခိုင်) စိမ်းလဲ့လဲ့(ရခိုင်) စိုးပြည့်သဇင်(ဗမာ) စုစု(ရခိုင်) စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်(ဗမာ) စိုင်းဆိုင်မောဝ်(ဗမာ) စိုင်းထီးဆိုင်(ဗမာ) စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့စိုင်းဆိုင်မောဝ်တို့၏ တေးသီချင်း စုစည်းမှုများ စိုင်းဒရား မင်းခွာသံတေးသခြင်းများစုစည်းမှု စိုင်းဒရားမင်းခွာသံ တေးစီးရီးသခြင်း(၂) စိုးစိုးအေး(ရခိုင်) စိုးမိုးသူ(မိုးဇော်) စိုးလွင်လွင်(ဗမာ) စုဝေ(ရခိုင်) စံမော်သိန်း(ရခိုင်) စန္ဒကူး(ရခိုင်) စန္ဒာဝင်း(ရခိုင်) စန္ဒီမြင့်လွင်(ဗမာ) ဆင်ပေါက်(ဗမာ) ဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်း၏ သမိုင်းဝင် မိန့်ခွန်းများ ဆုန်သင်းပါ(ဗမာ) ဆိုတေး တေးသီချင်း စုစည်းမှုများ(ဗမာ) ဆိုတေး(ဗမာ) ဇင်မာထွန်း(ရခိုင်) ဇံမင်းအောင်(ရခိုင်) ညိုစိမ့်(ရခိုင်) ညီမင်းခိုင်(ရခိုင်) ညီထွေး(ရခိုင်) ညှာစိမ်းခိုင်(ရခိုင်) တင်ဇာမော်(ဗမာ) တစ်စိတစ်စောင်း ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ တစ်ပင်တိုင် ရွှေမင်းသမီးတေးစီးရီးသခြင်း တမ်းတပုံရိပ် တေးစီးရီးသခြင်း တူတူ(ရခိုင်) တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နိန်ရ နိန်ရ(ရခိုင့်ဆရာတော်ရို့ဧ့တရားတော်) ထက်နေခြည်(ဗမာ) ထက်အောင်ကျော်(ရခိုင်) ထူးအယ်လင်း(ဗမာ) ထူးအိမ်သင်(ဗမာ) ထွဏ်းခမ်း(ဗမာ) ထွန်းထွန်း(ဗမာ) ထွန်းအိန္ဒြာဗို(ဗမာ) ထွန်းအောင်သာ(ရခိုင်) ဒိုးရီ(ရခိုင်) ဒီမိုးဇတ်(ရခိုင်) ဒီဖြိုး(ဗမာ) ဒိုးလုးံ(ဗမာ) ဒိုးလုးံတေးသီချင်း စုစည်းမှုများ(ဗမာတေး) ဓည၀တီလှသိန်း(ရခိုင်) နန်းဆုရတီစိုး(ဗမာ) နိယာမ တေးစီးရီးသခြင်း(ညီမင်းခိုင်) နီဝန်းမောင်(ရခိုင်) ပင်လယ်နားကလူ တေးစီးရီးသခြင်း(ကိုခိုင်ဇော်) ပိတောက်ပွင့်ချိန် သင်္ကြန်တေးစီးရီးသခြင်း ပိုးဝါ(ရခိုင်) ပူစူး(ဗမာ) ဖိုးကာ(ဗမာ) ဖိုးလုးံ(ရခိုင်) ဖိုးခေါင်(ရခိုင်) ဖူးသံသာ(ရခိုင်) ဗဒင်(ဗမာ) ဗမာ(ဆောင်းပါး) ဗမာစုံတွဲ တေးသီချင်း စုစည်းမှုများ ဗမာစုံတွဲ တေးသီချင်းများ ဗမာသီချင်း(ဗွီဒီယို) ဗမာဟစ်ဟော့ တေးသီချင်း ဗမာဟစ်ဟော့ တေးသခြင်းများ ဗမာတေးစီးရီးသီချင်း စုစည်းမှုများ ဗမာတေးသီချင်း စုစည်းမှုများ ဗဟိုစည်တေးစီးရီးသခြင်း ဗုဒ္ဓပူဇနိယ(ရခိုင်ရှီးဟောင်းတေး) ဗျာလ တေးစီးရီးသခြင်း ဘုန်းမင်းဇံ(ရခိုင်) ဘုန်းသျှန်(ရခိုင်) ဘိုဘို(ဗမာ) ဘိုဘိုနိုင်(ရခိုင်) ဘိုဖြူ(ဗမာ) မင်းမင်းချေ-စကောမ(ရခိုင်) မင်းမော်ကွန်း(ဗမာ) မစ္ဆာိမကဗျာ တေးစီးရီးသခြင်း မဒီ(ဗမာ) မာရဇ္ဇာ(ဗမာ) မိချော(ရခိုင်) မီးသျှေ(ရခိုင်) မုနိမြေမှ တေးသံသာတေးစီးရီးသခြင်း မိုးမိုး(ဗမာ) မိုးဇော်(ရခိုင်) မိုနို ရခိုင်တေးသခြင်း မိုနို ရခိုင်တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ မဲလုးံ(ရခိုင်) မျက်ဝန်းညို တေးစီးရီးသခြင်း မျိုးဆက်နွယ်စိုင် ပြည်ရခိုင် တေးစီးရီးသခြင်း မျိုးမင်းလေး(ရခိုင်) မျိုးရခိုင်(ရခိုင်) မျိုးသန့်ဇင်(ရခိုင်) မျိုးဝတီ(ရခိုင်) မျိုးကြီး(ဗမာ) မျိုးကြီးတေးသီချင်း စုစည်းမှုများ(ဗမာတေး) မွီးရပ်မြီ(ပိုးဝါ) မှတ်တမ်း မှတ်ရာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ(ဗွီဒီယို) ယုယုလှိုင်(ရခိုင်) ယုံယင့်လား တေးစီးရီးသခြင်း ရက္ခပူရမြင်ကွင်းသံချပ် စုစည်းမှုများ ရက္ခအားမာန်(ရခိုင်အမျိုးသားများ) ရက္ခိတမြတ်ဒါန တေးစီးရီးသခြင်း ရခိုင်တေးခြင်း ရခိုင် ဂုဏ်ဆောင် တေးသခြင်း ရခိုင်စစ်သည်တေး ရခိုင်စာပေအကြောင်း အသံဖိုဒ် ရခိုင်စုံတွဲတေးသခြင်းများ ရခိုင်ဆရာတော်ရို့၏ တရားဒေသနာတော် စုစည်းမှုများ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီတေးခြင်း ရခိုင်ထွီး တေးစီးရီးသခြင်း ရခိုင်နန့်ဗမာ တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှများ ရခိုင်နန့်အင်္ဂလိပ်တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရခိုင်သူနာင့် အခြားတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရခိုင်သင်္ကြန်တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရခိုင်သင်္ကြန်တေးသခြင်းများ ရခိုင်အလင်းတန်းအဖွဲ့(ရခိုင်) ရခိုင်အလှသဘာဝတေးစီးရီးသခြင်း(ဦးမောင်သိန်း) ရခိုင်အခြီခံ စိတ်ထားများ(ရင်တွင်းဖြစ်) ရခိုင်တေးစီးရီးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရခိုင်တေးသခြင်းတိ စုစည်မှုများ ရခိုင်တေးခြင်း(ဗွီဒီယို) ရခိုင်ရှေး(ဟြိး)ဟောင်းတေးသခြင်း ရခိုင့် ပုံရိပ်များ ရခိုင့်ဂီတ အာဟာရ တေးစီးရီးသခြင်း ရခိုင့်စုံတွဲတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရခိုင့်တာဝန်(၁၀)ချက် ရခိုင့်ရိုးရာ သံချပ်များ ရခိုင့်ဟီဟော့ တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရခိုင့်ဟီဟော့တေးသခြင်းများ ရခိုင့်အလံ ဖွင့်ဆိုချက်(ဆောင်းပါး) ရခိုင်နိုင်ငံတော် တေးသခြင်း ရခိုင်ဂုဏ်ဆောင် တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရင်ခွင်ဦးကဗျာ တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရတနာမိုင်(ရခိုင်) ရတနာဖြူဖြူအောင်(ရခိုင်) ရန်အောင်(ဗမာ) ရန်နိုင်(ရခိုင်) ရမ္မာဝတီစံဝင်း(ရခိုင်) ရာဇ၀င်(ကိုသန်းမောင်)တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ရာဇ၀င်ရိုင်းရေည တေးစီးရီးသခြင်း ရိမ်းမိုး(ဗမာ) ရီလှိုင်းပြာ(ရခိုင်) ရိုတ(ရခိုင်) ရိုးမမြီဖွား တေးစီးရီးသခြင်း ရိုးရာက မမ(အဖွဲ့) ရိုးတောင်ထက်သို့ ဓားမမိုးစီချင် ရိုးတောင်ထက်သုိ့ ဓားမမိုးစီချင် တေးစီးရီးသခြင်း ရဲရင့်(ဗမာ) ရဲရင့်(ရခိုင်) ရဲလင်းအောင်(ရခိုင်) ရဲလေး(ဗမာ) ရွက်ကျပင်ပေါက် တေးစီးရီးသခြင်း ရှင်ဖုန်း(ဗမာ) ရှိုင်းဝတ်ရည်သိန်း(ရခိုင်) ရှိနေမယ် တေးစီးရီးသီချင်း(ဟန်ထွန်း-ဗမာတေး) ရွှီဘော်သိန်း(ရခိုင်) လင်းနစ်(ဗမာ) လင်းလင်း(ဗမာ) လပ(ရခိုင်) လီဗာချစ်သူ လခြမ်းမြီမှ ကြိုဆိုပါ၏ တေးစီးရီးသခြင်း လပြည့်အောင်(ရခိုင်) လွမ်းမိုး(ဗမာ) လှိုင်ဦးမော်(ဗမာ) လနူး(ဗမာ) သန့်ဇင်(ရခိုင်) သန်းသန်းဆင့်(ရခိုင်) သန်းဇော်(ရခိုင်) သန်းမောင်(ရခိုင်) သာလီစွ သာစွလီ တေးစီးရီးသခြင်း သိန်းထိုက်ဇော်(ရခိုင်) သိန်းလင်းစိုး(ဗမာ) သိရိနန္ဒာစိုး(ရခိုင်) သိရိဆွေ(ဗမာ) သိကေ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့လဲ(၁)(ရခိုင့်ဆရာတော် တရားတော်) သိကေ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့လဲ၉၏(၂)(ရခိုင့်ဆရာတော် တရားတော်) သန္တာဦး(ဗမာ) ဟက်ပီး(ရခိုင်) ဟန်ထူးလွင်(ဗမာ) ဟန်ထွန်း(ဗမာ) ဟာသ ဟဲလေး(ဗမာ) အချစ်အကြွီသား(ဖိုးလုးံ) အချစ်ဦး(နိုး-ဗမာတေး) အချစ်နေ့သစ်တိုင်း ဗမာတေးစီးရီးသီချင်း အင်္ဂလိပ်တေးခြင်း အငဲ(ဗမာ) အန်ဒီရှိုင်း(ဗမာ) အပယ်တံခါး မပွင့်စီချင်(စေတီပြင် ဆရာတော် တရား) အမည်မသိ(ဗမာ) အမည်မသိ(ရခိုင်) အယ်နှောင်း(ဗမာ) အရူးကမ္ဘာ တေးစီးရီးသခြင်း အလင်းတံခါး(ခိုင်ကျော်လင်းအဖွဲ့) အလင်းမီးအိမ် တေးစီးရီးသခြင်း အသည်းဦး(မြင့်ရ်မို) အသည်းလေဟာပြင်(ဥူးမောင်သိန်း) အာကာ(ရခိုင်) အာဇာနည်(ဗမာ) အာရက္ခမြီ(၀င်းကိုခိုင်) အာရိယန်(ရခိုင်+ဗမာ) အိပ်မက်ထဲက ရထားကြီး(မီမီဝင်းဖေ-ဗမာတေး) အိမ်ကိုလွမ်းတယ်(ပူစူး-ဗမာတေး) အိမ်ချစ်(ဗမာ) အိမ်မက်ဆိုး(မြတ်ခိုင်ကျော်) အိမ်မက်များ(ဖြူဖြူကျော်သိန်း-ဗမာတေး) အိမ်ပြန်ချိန်(ရမ္မာဝတီစံဝင်း) အီတိုး(ဗမာ) အိုးဘာလေး(စစ်အိမ်) အပေါင်းလက္ခဏာ တေးစီးရီးသခြင်း အဖြေ(ရိမ်းမိုး-ဗမာတေး) အဲလစ်(ဗမာ) အပြာရောင်ကောင်းကင် တေးစီးရီးသခြင်း အပြာရောင်ကောင်းကင်(တူတူနာင့်အဖွဲ့) အပြုးပန်းလန်းစီမေ(ကိုကြီး) အမြင်မရှင်းသော ဗမာတွေအတွက်(ဆောင်းပါး) ဥက္ကာဖြိုး(ရခိုင်) ဥဒါန်းမကျီ ဥမ္မာ(ရခိုင်) ဥာဏ်လင်းအောင်(ဗမာ) ဦးနေမျိုးဝေ ဘာသာပြန်ထားသော ကုရ်ကျမ်း ဦးမောင်သိန် လိုက်ရှုိးတေးစီးရီးသခြင်း ဦးမောင်သိန်း မိုနိုတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ဥူးကျော်လှ(ရခိုင်) ဥူးမောင်သိန်း(ရခိုင်) ကောင်မလေး(ဗမာတေး) ကောင်းကောင်း(ဗမာ) ကောင်းသော ညပါ(အငဲ-ဗမာတေး) ကျော်ခင်(ရခိုင်) ကျော်သီဟ(ဗမာ) ချောစု(ရခိုင်) ဂျေညီမလေး(ဗမာ) ဂျောက်ဂျက်(ဗမာ) ဂျေးမီ(ဗမာ) ဂေါ်ရီ(ဖိုးလုးံ) စောမင်းသိမ်း(ရခိုင်) စောနှင်းနွယ်(ရခိုင်) ဆောင်းပါး(ရခိုင်) ဆောင်းဦးလှိုင်(ဗမာ) ဆေးပေးပါ(မျိုးကြီး-ဗမာတေး) ဇေယျာဟိန်း(ရခိုင်) ဇေရဲ(ဗမာ) ဇော်ပိုင်(ဗမာ) ဇော်ဇော်(ရခိုင်) ဇော်ဝင်းထွန်း(ဗမာ) ဇော်ဝင်းရှိန်(ဗမာ) တော်ဝင်သဇင်(အထူး) တေးသီချင်းများ ပို့ပေးသူစာရင်း နေချင်တာ မင်းအနား(ဗမာတေး) နေတိုး(ရခိုင်+ဗမာ) နေတိုး(ရခိုင်) နေထက်လင်း(ရခိုင်) နေပါစေ ချစ်လို့(ထူးအယ်လင်း-ဗမာတေး) နေမျိုး(ဗမာ) နေရာတိုင်းမှာ(စိုင်းထီးဆိုင်-ဗမာတေး) နောက်တစ်ခါ မတွေ့ဘူး(ဖြူဖြူကျော်သိန်း-ဗမာတေး) နောနော်(ဗမာ) နေ့တိုင်း မင်္ဂလာပါ(ဘိုဖြူ-ဗမာတေး) ပေါက်ကွဲခွင့်(ညီမင်းခိုင်) ပေးစာ ဖော်ကာ ဗမာတေးသီချင်း စုစည်းမှုများ ဖော်ကာ(ဗမာ) ဖော်ကာ(ဗမာ+ရခိုင်) ဖော်ကာ(ရခိုင်) မေဆွိ(ဗမာ) မောင်ကိုကို(ရခိုင်) မောင်သူ(ရခိုင်) မောင်ကျော်သာ(ရခိုင်) မေ့လို့မရသေးဘူး(ဗမာတေး) မှော်နတ်သမီး(စစ်အိမ်) ရေဗက္ကာဝင်း(ဗမာ) ရွှေရည်ဖြိုးကျော်(ဗမာ) လေးဖြူ(ဗမာ) လေးဖြူတေးသီချင်း စုစည်းမှုများ(ဗမာတေး) ဟေမာနေ၀င်း(ဗမာ) အောင်ရဲလင်း(ဗမာ) အောင်လှ(ဗမာ) အောင်နိုင်သန်း(ရခိုင်) အေးသင်းချိုဆွေ(ဗမာ) အေးမောင်(ရခိုင်)ဲJ မင်း(ရခိုင်) ငြိမ်းစန္ဒာ(ရခိုင်) ပြည့်စုံ(ဗမာ) ပြန်ဆုံခွင့် တေးစီးရီးသခြင်း ဖြိုးကာ တေးသီချင်းများ(ဗမာတေး) ဖြိုးဝတီ(ရခိုင်) ဖြိုးကြီး(ဗမာ) ဖြူဖြူကျော်သိန်း(ဗမာ) မြင့်မို(ရခိုင်) မြတ်ခိုင်ကျော်(ရခိုင်) မြတ်ထွဏ်းခိုင်(ရခိုင်) မြတ်ထွန်းသိန်း(ရခိုင်) မြတ်မင်းဇင်(ရခိုင်) မြန်မာ(ဗမာ)တေးခြင်း မြန်မာတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ(၆) ၀င်းကိုခိုင်(ရခိုင်) ၀င်းကိုခိုင်၏ အာရက္ခမြေတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ ၀တီစိုးမိုး(ရခိုင်) ၀တ်မှုန်(ဇော်ပိုင်) ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း(ဗမာ) ၀ိုင်ဝိုင်း(ဗမာ)္မဤသည်ရခိုင်သား ဤကားရခိုင်ပြည်(ကိုကိုနိုင်+စိမ်းလဲ့လဲ့) ကြိုးကြာ(ဗမာ) နှင်း(ခိုင်ကျော်လင်း) နှင်းနှင်းနွယ်(ရခိုင်) bransaing(ဗမာ) Coalition of English Song cobra(ဗမာ) Distinction Distinction(Video) idiot(ဗမာ) japan song L ကိုလင်း(ရခိုင်) L လွန်းဝါ(ဗမာ) L-ကိုင်ရာ(ဗမာ) L-ဆိုင်းဇီ(ဗမာ) NC-13(ဗမာ) ng2k(ဗမာ) noknownname(english) Pi Soul(ဗမာ) Right&Wrong တေးစီးရီးသခြင်း sacoma(ရခိုင်) scorpion(english) sharkia(english) Starry Night တေးစီးရီးသခြင်း Unknown(English) wanted(ဗမာ)
(Click This Picture For Ancient MraukOo History)